Iindidi eziqhelekileyo zokuzila ukutya okukhawulezileyo Discover️ Discover Online ▷ ▷️
Iindidi eziqhelekileyo zokuzila ukutya
1 Yintoni ukutya okukhawulezileyo?
2 Iindidi zokuzila okukhawulezileyo zikhona
4 Indlela yokwenza
Yintoni ukutya okukhawulezileyo?
Ukuzila ukutya yinto yakudala, kwaye phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokuzila okukhoyo, ixesha lokuphumla yeyona nto kuthethwa ngayo namhlanje.
Igama lokuzila libhekisa kurhulumente ongatyiswanga, lithetha ukungatyi nantoni na, kwaye ixesha eliphakathi lithetha into engenzeki ngokuqhubekayo.
Ke ngoko, ixesha lokuzila ngokukhawuleza kufuneka ngamanye amaxesha apho kuthintelwa ukutya, kuxutywe namaxesha okunikezela ukutya emzimbeni.
Iindidi zokuzila okukhawulezileyo zikhona
Zine iindlela eziphambili zokuzila ukutya, kwaye zonke ziyahluka ngexesha lokunqongophala kokutya:
Eyokuqala neyokuqalwa yokuqala yamkelwe ziiyure ezili-12;
Eyesibini ziiyure ezili-16 zilandelelana ngaphandle kokutya, kwaye kwiiyure ezisi-8 ezisele zosuku oko sikubiza ngokuba yiwindow yokutya kuyenzeka, lelo lixesha lokutya kungagxila;
Ukuzila ukutya kweeyure ezili-18;
Okwesine kunye neyona ixhaphakileyo kukuzila ukutya kweeyure ezingama-24, apho kutyiwa kuphela isidlo esinye emini, kwaye ukutya okulandelayo kufuneka kwenziwe ngexesha elinye ngosuku olulandelayo.
Ukwehla kobunzima, kuba ukuzila ukutya kuthanda ukutshiswa kwamafutha njengomthombo wamandla kwimisebenzi ephambili yomzimba;
Ukonyuka kwimveliso ye-HGH, ihomoni yokukhula ethanda inkcitho yolondolozo lwamafutha;
Ukunciphisa amanqanaba e-insulin egazini;
Ubomi obude kunye nokwanda kwexesha lokuphila leeseli.
Ukuqala kokukhanyisa ngokukhawuleza kulula kakhulu. Okokuqala, ukhathazeke ngokutya okunezakha-mzimba, ke kuya kuba lula ukuhlala uzolile ngexesha ongavumelekanga ukuba utye ngalo.
Ukuqala umthetho onomdla ukwenza inkqubela phambili yeentlobo zokuzila ukutya, kwaye ngokuthe ngcembe ziguqula amaxesha. Qala ngokuzila ukutya iiyure ezili-12, uthathe ithuba lokulala ukunciphisa inkqubo, kwaye wandise ixesha lakho lokuzila de ufike kwiiyure ezingama-24 ungatyanga.
Ngexesha lokuzila livunyelwe kwaye kubalulekile ukuba uhlale unamanzi ngamanzi. Iitayi kunye nekofu nazo ziyavunyelwa ukuba nje zingaswiti, nditsho neziswiti.
Ngaba ziphilile iitapile? Izibonelelo kunye neepropathi
IMiso, yintoni, izibonelelo kunye nendlela yokusebenzisa
IIMPILO ufunde YEHLA EMZIMBENI Ukuphulukana nobunzima | INGXAKI IINxila IBhayibhile UKUPHILA Njani Iidayos Iintlobo ezahlukeneyo Injongo Imifanekiso Icawa yamaKatolika Iintsomi Imiyalelo IMathematika Amaphupha am Imithandazo Popular Iinkonzo Iisakramente Santos Akukhohlulwanga Amaphupha Iifayile ukuvumisa Whatsapp